बुढानिलकण्ठमा १ कराेड लगानीमा आयुर्वेद अस्पताल बन्ने - Asian Samachar
बुढानिलकण्ठमा १ कराेड लगानीमा आयुर्वेद अस्पताल बन्ने
Asian Samachar बिहिबार, पुस २१, २०७३ (1 year ago) समाचार, स्वास्थ्य
काठमाडौं, सरकारले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले बुढानिलकण्ठ- ४ मा सरकारी लगानीमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१३ रोपनी ११ आना जग्गामा फैलिने आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र सुरुमा ५० शैयाको हुनेछ । यसमा नसर्ने रोगहरुको उपचार आयुर्वेदिक पद्दतीबाट गरिने छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालय आयुर्वेद विभागका चिकित्सक डा. शंकर गौतमका अनुसार केन्द्र स्थापनाको लागि आयुर्वेद विभागले एक करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइसकेको छ । थप बजेट केन्द्र स्थापना भएसँगै थपिँदै जाने डा. गौतमले बताए ।
उनले भने, ‘हालका लागि पञ्चकर्मसहित नसर्ने रोगबारे उपचार गरिने यस केन्द्रमा सम्पूर्ण उपचार प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित हुनेछ । त्यसको लागि हामीले कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदमा आजै पेश गरेकोमा पारित पनि भएको छ ।’अब बजेट आउनासाथ अगाडिको काम सुरु हुने उनले बताए । यद्यपी, अहिले नितिगत निर्णयमात्र भएकाले केन्द्रको निर्माण कहिलेसम्म हुन्छ भनेर अहिले नै यकिन भन्न नसकिने डा. गौतम बताउँछन् ।
बुढानिलकण्ठमा आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र स्थापना भएपछि जडिबुटीको क्षेत्रमा धनी मानिएको नेपालमा जडिबुटीको विकास तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
हाल काठमाडौंको नरदेवीमा आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल छ भने सिंहदरवार वैद्यखानाले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । हालै बारामा योग गुरु रामदेवको प्रमुख लगानीमा आयुर्वेदिक उद्योग स्थापना भएको थियो ।